"Galleries, kusurukirwa uye dzimwe nhetembo" naAntonio Machado | Zvazvino Zvinyorwa
Machado muna 1903 akaburitsa bhuku rake "Soledades" uye akapedzisira achiwedzera muna 1907 pasi pezita "Solitudes, maberere uye dzimwe nhetembo", ibasa rehukama hwepedyo uye hwakadzikama umo zvinhu zvine ruzha zvakanyanya zvinotsiviwa nezvimwe zvinoratidza hukuru hwakawanda uye nyore, mhedzisiro yekuratidzira uye kufamba kwenguva pakati pekuburitswa kwe "Soledades" nekuwedzera kwayo.
Mune iri basa varipo sevose, iyo obsessions yeMachado iyo kufamba kwenguva kwakamuunza kumusoro, nekurangarira nguva dzese kwevechidiki vakarasika uye nekugara uye kwakanyarara kuvapo kwerufu kunovandira mumakona ese, kuchitiyeuchidza nezvekufamba kwenguva uye nenyaya yekuti tese tichaguma takafa zuva, chimwe chinhu chinodzokororwa kakawanda pamusoro nenzira dzakasiyana mundima dzemunyori weSevillian.
Pamusoro pemibvunzo yakakandwa mumhepo nezwi renhetembo, tinowana mune iri basa rakanaka kwazvo akati wandei zviratidzo izvo hazvina dudziro imwe chete asi maungira akasiyana, izvo zvinoita kuti vapfume uye vawedzere semi-vanokosha. Masikati angave ari mumwe wavo. Ino nguva yezuva inogara yakasuruvara uye yakanyungudika uye inoreva kuderera kusingakanganisike kwakamirira zvese zvipenyu muhupenyu huno uye izvo zvakanyanya kufungidzirwa Machado.
Mvura, zvisinei, ihwo hupenyu, kunyangwe painonzwika, inotitakura kuenda kune nyika isingafadzi uye inodzokorora iyo kusurukirwa kunenge kwakavhiringidzika nemarwadzo. Matsime ndangariro dzekurasika kwehuhwana, nguva inofadza asi inorwadza chero bedzi isingadzoreki, sezvakangoita gadheni nebindu remichero. Pakupedzisira iyo migwagwaChiratidzo chayo chinonyanya kuzivikanwa inzira dzinotitungamira kumagumo ehupenyu, asi panonyanya kukosha chaipo.
Mamwe mashoko - Hupenyu hwaAntonio Machado
Mufananidzo - Summit2b
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Solitudes, maberere uye dzimwe nhetembo
Uye nei kushamwaridzana kwemazuva ano kuchitaurwa nezvayo mumakamuri ari ega uye nedzimwe nhetembo naAntonio Machado?
Pindura kuna Mohamed